သဘာဝပန်းရောင်ဇာကွန်နီယမ်, တန်ဇန်းနီးယားကနေအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မီး, ဗွီဒီယို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆိုင်တွင်သဘာဝပန်းရောင် zircon ကိုဝယ်ပါ
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. မသေချာမရေရာဇာစ်မြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကိုရွှေရောင်စုံဆိုလိုတာက vermillon အဓိပ္ပာယ်အာရဗီ« zarkun »ထံမှ, ဒါမှမဟုတ်ရှ« zargun »လက်မှငါတို့ကိုရန်လာကြပေမည်
အလယ်ခေတ်မှာတော့ zircon အိပ်ပျော်ခြင်းသွေးဆောင်အဖြစ်ဂုဏ်အသရေနှင့်ဉာဏ်ပညာမြှင့်တင်ရန်ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာထိုမှတပါး, zircon ဘေးဒဏ်နှင့်နတ်ဆိုးနှင်ထုတ်ဖို့စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်၎င်း၏ပိုင်ရှင်မှစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုဆောင် ခဲ့. ယုံကြည်ခဲ့သည်။
COLOR: အပြာရောင်အနီ, အဝါရောင်, လိမ္မော်ရောင်, အညိုရောင်, အစိမ်း
အလင်းယိုင် INDEX: 1.925 မှ 1.984 (+/- 0.040)
အလယ်အလတ်: 1.875 မှ 1.905 (+/- 0.030)
LOW: 1.810 မှ 1.815 (+/- 0.030)
BIREFRINGENCE: 0.000 မှ 0.059 (အမြင့်အနိမ့်)
SPECIFIC Gravity: 3.90 မှ 4.73
MOHS Hard:6မှ 7.5 (အမြင့်အနိမ့်)
zircon ကျောက်မျက်ကုန်သည်တွေနဲ့စုဆောင်းတဲ့အကြိုက်ဆုံးကြောင်းသဘာဝကျောက်မျက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာလက်လီလက်ဝတ်ရတနာဈေးကွက်ထဲမှာလူသိများမဟုတ်ပါဘူး။ အမှန်စင်စစ်အချို့စားသုံးသူများကုဗ zirconia တစ်ဦးစိန် Simulator အဖြစ်ရောင်းစားတစ်ဦးစျေးပေါဒြပ်နှင့်အတူကရှုပ်ထွေး။
ဒါဟာအထူးသဖြင့်၎င်း၏အဆင့်မြင့်ယိုင်ညွှန်းကိန်းများနှင့်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မီးများအတွက်တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ zircon နီလာ, ပတ္တမြား, spinel သို့မဟုတ် tanzanite ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်မျက်စိအလင်းယိုင်ညွှန်းကိန်းရှိပါတယ်။ zircon လည်းစိန်အဖြစ်နီးပါးမြင့်တဲ့ပျံ့နှံ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အတူအထင်ကြီးမီးရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်အပြာ, အနီ, ပန်းရောင်, လိမ္မော်ရောင်, ပျားရည်, အပါအဝင်အရောင်များကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးအတွက်ရှာတွေ့ပါကအမှန်ပင်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုလက်ဝတ်ရတနာစေသည်။
Gemologically က Mohs scale ပေါ် 7.5 တစ်ဦး, ခိုင်မာသော, ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုအားဖြင့်တစ်ဦးဇာကွန်နီယမ် silicates ဖြစ်ပါတယ်။ အကာအကွယ် settings ကိုကွင်းအဘို့အကြံပြုကြသည်သော်လည်းဒါဟာလက်ဝတ်ရတနာအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့သင့်လျော်သည်။
zircon ကမ္ဘာမြေ၏အပေါ်ယံလွှာတွင်နေရာအနှံ့ပါပဲ။ ဒါဟာအသွင်ပြောင်းကျောက်ဆောင်နှင့်နည်ကျောက်ဆောင်များတွင် detrital အစေ့အဖြစ်, (မူလတန်း crystal ထုတ်ကုန်ကဲ့သို့) များမှာမီးသင့်ကျောက်တို့ကိုတစ်ဘုံဆက်စပ်ပစ္စည်းဓာတ်သတ္တုအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အကြီးစား crystals ရှားပါးဖြစ်ကြသည်။ ကျောက်ကျောက်ဆောင်မှာသူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှအားအရွယ်အစား 0.1-0.3 မီလီမီတာအကြောင်း, ဒါပေမဲ့သူတို့မှာလည်းအထူးသဖြင့် mafic pegmatites နှင့် carbonatites အတွက်အများအပြားစင်တီမီတာ၏အရွယ်အစားမှကြီးထွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အပူနှင့်ချေးရန်အလွန်ယဉ်ပါး။
စိမ်းနှင့် tanzanite အတူဒီဇင်ဘာလ birthstone ။
Tags: opal, ပန်းရောင်, ပန်းရောင် opal
ပန်းရောင် brecciated mookaite
Tags: အချစ်ရေး, Mookaite, ပန်းရောင်
မည်သည့်အမှာစာအတွက်မဆို $ 50.00 အခမဲ့အမြန်ပို့ဆောင်ခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာ | မွေးရပ်မြေ | ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ